Podcast 13x12: Mapurogiramu Edu Atinoda | Ndinobva ku mac
Podcast 13 × 12: Mapurogiramu Edu Atinoda
Nezuro hatina kutadza svondo podcast pachiteshi chedu Youtube Uye tinogovana newe dzimwe dzenyaya shoma dzinozivikanwa dzatave nadzo svondo rino, izvo zvisina kunyanya kuwanda. Chero zvazvingaitika, isu tinogara tichiwana Apple nhau uye pachiitiko ichi, kunyangwe vashoma, isu tinobata pane mamwe akakurumbira. Takabva tatanga ona uye ugovane mapurogiramu akasiyana siyana atinoshandisa muzuva redu kune ese ari maviri iOS uye macOS izvo zvinoumba podcast. Pakupedzisira, mamwe maapplication akabuda aungave usina kuziva izvo zvingave zvekufarira kwauri.
Iyo podcast vhidhiyo kana iwe uchida kuona zviso zvedu (kunonoka mangwanani) ndizvo zvinotevera:
Kune rimwe divi, isu tinogovana iyi link kuitira kuti iwe ugone kupinda zvakananga mukati yedu YouTube chiteshi uye kuti iwe unogona kutiteverera mune inotevera episode gara kana iwe unogona kunakirwa nepodcast yakaburitswa mu iTunes (mumaawa mashoma anotevera) kuiteerera chero nguva uye chero kwaunoda. Kana iwe uine chero mibvunzo kana mazano uye iwe uchifunga kuti tinogona kutaura nezvazvo pane podcast unogona kuzviita kurarama kuburikidza nehurukuro inowanika paYouTube, uchishandisa hashtag#podcastapple pa Twitter kana kubva teregiramu yedu chiteshi Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti ndeye mahara kune wese munhu uye isu tiri vakawanda uye vazhinji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Podcast 13 × 12: Mapurogiramu Edu Atinoda
Chirongwa chitsva chevashandisi kugadzirisa midziyo yavo
Iyi ndiyo nzira iyo robhoti Jeff kubva mufirimu Finch, inoridzwa naTom Hanks, yakagadzirwa